IChina ihola imikhankaso yokuqeda ubuphofu – Bayede News
UHulumeni uthi ngokukwazi ukukhiqiza ukudla okwanele kuleli lizwe labantu abalinganiselwa ezigidigidini ezingu-1.4, bayakwazi ukuqinisekisa ukuthi abantu baphila kangcono.
Posted on 3 December 2019 3 December 2019 by nguZanele Buthelezi
UHulumeni waseChina uhlele ukuthi uqede ububha ngonyaka wezi- 2020 kuleli lizwe. Yize kubonakala kuwumsebenzi omkhulu leli lizwe elizibekele wona wokutakula izigidi zabantu abahlwempu, kodwa ngokwezibalo zikaHulumeni, ubonakala usumkhulu umehluko osuwenziwe.
Izibalo zikaHulumeni zikhomba ukuthi kusukela eminyakeni engamashumi amane endlule leli zwe lavuleleka, bangu-800 million abantu asebekhishiwe esimweni sobubha. Lokhu kwenze lelizwe libe nesibalo esikhulu kunawo wonke amazwe omhlaba sabantu abebehaqwe ububha nasebesiziwe ukuphila impilo engcono.
Leli zwe selithathwa njengesibonelo esihle kwamanye amazwe kule nyanga yokukhuthaza ukwenziwa ngcono kwezimpilo zabampofu. IChina inconywe yiNhlangano Yezizwe ngomsebenzi leli lizwe esiliwenzile ukulwa nobhubha. UNobhala Jikelele weNhlangano Yezizwe u-Antonio Guterres uthe inzuzo enkulu emkhankasweni wokulwa nobubha emlandweni.
Ekuqaleni kwale nyanga uMfumfu, iNhlangano Yezizwe ibungaze i-International Day for the Eradication of Poverty, nokuwusuku olubekelwe ukugqugquzela izinhlelo zokwenza ngcono impilo yabadla imbuya ngothi.
UMqondisi weSigungu sikaHulumeni esibhekene nokulwa nobubha kanye nentuthuko eChina, uLiu Yongfu uthe amaphesnti angama-95 wemiphakathi esohleni lwaleyo ehlwempu izobe isikhishiwe ekupheleni konyaka.
Ukukhuthazwa kwezimboni ezihambisana nemikhiqizo yezindawo, izinhlelo zokuvuselelwa nokongiwa kwemvelo, izinhlelo zokulekelela abalimi, ukuqiniswa kwemfundo kanye nokuqinisekisa ukuthi izinhlelo ziyalandelwa, ezinye zezinto uHulumeni azibala njengezenza ukuthi impi yokulwa nobubha iyaphunyelelwa.
Ezindaweni eziningi uHulumeni ukhuthaza alekelele abalimi abancane, kanye nezinhlelo zokuvuselela nokongiwa kwemvelo. Ezinye zezindawo ezivuselelwayo yilezo eseziwugwadule ukuze abantu bahlale kangcono kuzo.
UHulumeni uphinde wakhipha umbiko weziphakamiso echaza kabanzi ngesimo sokudla ezweni ngesonto elendlule. Kulo mbiko, uHulumeni uthi ngokukwazi ukukhiqiza ukudla okwanele kuleli lizwe labantu abalinganiselwa ezigidigidini ezingu-1.4, bayakwazi ukuqinisekisa ukuthi abantu baphila kangcono.
UHulumeni waseChina uthi ngowezi-2010 umkhiqizo wokudla ube ngaphezulu kwamathani ayizigidi ezingama-550, kwathi ngowezi-2018 adlula izigidi ezingama-660. Uthi umkhiqizo wokudla weChina ubaluleke kakhulu ngoba usiza ukuxhasa lowo womhlaba.
Nokho uma ubheka amadolobha amakhulu ungacishe ucabange ukuthi izwe lonke ligcwele intuthuko. Nokho ngokwembiko zikhona izindawo ezisasilele kakhulu emumva, ikakhulu lezo eziqhelele namadolobha amakhulu kanye nasezindaweni ezingasogwini olusempumalanga. Lesi simo sikhomba ukuthi izinga lokungalingani nalo liseyinselelo.
Posted in iBayede Kuleli Sonto, Inkundla Yabantu